စံချိန်သစ် နဲ့ မန်စီးတီး ၊ ရီးရဲကို ဖိအားပေးဆဲ ဘာကာတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစားသတင်းများ - SPORTS MYANMAR
စံချိန်သစ် နဲ့ မန်စီးတီး ၊ ရီးရဲကို ဖိအားပေးဆဲ ဘာကာတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစားသတင်းများ
မန်ချက် စတာ စီးတီး အသင်းဟာ ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မှာ နယူး ကာဆယ် အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးမိုး ရွာပြီး မှတ်တိုင်သစ်တွေ စိုက်ထူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ စီးတီး အတွက် ဂျေဆူး ၊ မာရက် ၊ ဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗား နဲ့ စတာလင် တို့က ၁ ဂိုးစီ သွင်းပေး ခဲ့ကြပြီး နယူးကာဆယ် ကစား သမား ဖာနန်ဒက်စ် က O.G တစ်လုံး သွင်းပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီပွဲ အပြီးမှာတော့ စီးတီး ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်း တစ်လျောက် တစ်ရာသီ အတွင်း သွင်းဂိုး ၁၀ ဂိုး နဲ့ အထက် ကစား သမား ၅ ဦး ရှိတဲ့ ပထမဆုံး အသင်း ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် နဲ့ ဝုဗ် တို့ပွဲမှာတော့ ရှက်ဖီး က ၁ – ၀ နဲ့ အနိုင်ရပြီး ချန်ပီယံ လိဂ် ဝင်ခွင့် အိပ်မက်တွေ ရှင်သန် ဆဲ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘန်လေ ကလည်း ဝက်စ်ဟမ်း ကို အဝေးကွင်းမှာ ၁ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။
ချန်ပီယံ လီဗာပူး ကလည်း အဝေးကွင်းမှာ ဘရိုက်တန် ကို ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး မိုဆာလာ က ၂ ဂိုးသွင်းကာ ရွှေဖိနပ်ဆု ပြိုင်ပွဲထဲ ကို ပြန်ဝင် လာခဲ့ ပါတယ် ။ နောက်ထပ်တစ်ဂိုး ကိုတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆင် က သွင်းယူ ပေးခဲ့ တာပါ ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ဘာစီလိုနာ ဟာ အက်စ်ပန်ညို အသင်းကို တိုက်စစ်မှုး လူးဝစ် ဆွာရက် ရဲ့ တစ်လုံး တည်းသော ဂိုးနဲ့ အနိုင် ရပြီး ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ၁ မှတ် အကွာ ကို လှမ်းတက် လာနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီပွဲမှာ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှုးလေး အန်ဆု ဖာတီ နဲ့ အက်စ်ပန်ညို ကစား သမား တစ်ဦးတို့ အနီကတ် နဲ့ ထုတ်ပယ် ခံခဲ့ ကြရ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ကလပ် အန်းဂါးစ် အသင်းရဲ့ တောင်ပံ ကစား သမား အယ်လ် မီလာလီ ဟာ လူမြင်ကွင်းမှာ တစ်ကိုယ်တော် အာသာဖြေမှု အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းမှု ကို ခံခဲ့ရ တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဒီ ကစား သမား အတွက် ဒီနှစ် အတွင်း ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဖြစ်တယ် လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ ကတော့ ရာသီ အကုန် မှာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ တော့မယ့် ဝါရင့် ကွင်းလယ် ကစား သမားကြီး ဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗား ဟာ ဂုဏ်ပြု နှုတ်ဆက် ပွဲ အတွက် အစ်တီဟတ် ကို ပြန်လာမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ပြောဆို ခဲ့သလို အဆိုပါ ပွဲကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ဝင်ကြည့်ခွင့် ရရှိ ချိန်မှသာ ပြုလုပ် သွားမယ် လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ဝါရင့် ဂိုးသမားကြီး ဘူဖွန် ကတော့ သူ ဟာ တစ်နေ့မှာ ယူဗင်တပ် အသင်း ကို နည်းပြ အဖြစ် တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ် လိုပါတယ် လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို လာခဲ့ ပါတယ် ။
နောဝှစ် စီးတီး အသင်း ဟာ သူတို့ရဲ့ ခံစစ်မှုး ဘန်ဂေါ့ဖရေး ကို လိုချင်တဲ့ အသင်းတွေ အတွက် ပေါင် သန်း ၅၀ တန်ကြေး သတ်မှတ် လိုက်တယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဂေါ့ဖရေး ကို ဂျာမန် ကလပ် ၂ သင်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ့မွန်နဲ့ လိုက်ပ်ဇစ် တို့က စိတ်ဝင်စား နေကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ပဲလေ့စ် နဲ့ ပွဲမှာ Man of the Match နဲ့ ထိုက်တန်မှု ရှိခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား ၂ဦး ရဲ့ ခြေစွမ်း ကို ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်လာတဲ့ #လမ်းပတ်
ဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်း ၁ ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင် ခဲ့ပေမယ့် ဆာလား အပေါ် သဘောမကျဖြစ်နေတဲ့ ဂရေမီဆောင်းနက်